“Izay misy ny fanahin’i Jehovah dia misy fahafahana.”​—2 KOR. 3:17.
7 Nataon’i Jehovah afaka misafidy hoatran’ny anjely i Adama, ilay lehilahy voalohany. Nampiavaka azy tamin’ny biby izany. Nisy fotoana izy nampiasa tsara ny fahafahana nomena azy. Efa nisy talohan’ny olombelona, ohatra, ny biby, ka efa azon’i Jehovah nomena anarana. I Adama anefa no nasainy nanome anarana azy ireo, ary azo antoka fa faly erỳ izy nanao an’izany. Nentin’i Jehovah tany aminy ny biby “mba hahitana izay hiantsoany azy avy.” Nandinika ny biby tsirairay i Adama, dia nifidy anarana nety tsara taminy. Tsy nisy novan’i Jehovah izay anarana nofidiny. “Izay niantsoan-dralehilahy ny zavamananaina tsirairay, dia izany no anarany.”​—Gen. 2:19.
9 Noho i Adama sy Eva tsy nankatò, dia lasa tsy lavorary sy maty ny taranany. Mbola avelan’i Jehovah hisafidy izay tiany sy hanapa-kevitra anefa izy ireo. Manaporofo an’izany ny zavatra nataony tamin’ny firenen’Israely. Nasainy nisafidy izy ireo hoe hanaiky ho lasa fananany manokana sa tsia. (Eks. 19:3-6) Nanaiky ho lasa vahoakan’Andriamanitra sy hanaraka ny fitsipiny izy ireo, ka niteny hoe: “Vonona hanao izay rehetra nolazain’i Jehovah izahay.” (Eks. 19:8) Mampalahelo anefa fa lasa tsy nampiasa tsara ny fahafahana nomena azy ny Israelita, sady tsy nitana ny teniny. Inona no ianarantsika avy amin’izany? Tokony hankasitraka foana ny fahafahana omena antsika isika, ka hifandray akaiky amin’i Jehovah sy hankatò ny fitsipiny foana.​—1 Kor. 10:11.
10 Maro ny mpanompon’i Jehovah nanaja ny fitsipiny, rehefa nisafidy izay tiany hatao. Nahazo fitahiana be dia be izy ireo noho izany, sady afaka nanantena hoavy tena tsara. Misy 16 amin’izy ireo resahin’ny Hebreo toko faha-⁠11. Anisan’izany i Noa. Tena nanam-pinoana izy sady nifidy ny hankatò an’i Jehovah. Nanao sambofiara izy mba hamonjena ny ankohonany sy mba tsy hahalany tamingana ny olombelona. (Heb. 11:7) Nifidy ny hankatò an’i Jehovah koa i Abrahama sy Saraha. Niala tany Ora, tanàna nanankarena, izy ireo ka nifindra tany amin’ny “tany voalazan’ny fampanantenana.” Nety ho “nahita fomba niverenana” tany izy raha tiany. Nanam-pinoana anefa ry zareo, ka nifantoka tamin’ny fampanantenan’Andriamanitra. ‘Toerana tsara kokoa no nokatsahiny.’ (Heb. 11:8, 9, 13, 15, 16) I Mosesy indray tsy niraharaha an’ireo zava-tsarobidy tany Ejipta. “Naleony nampijalina niaraka tamin’ny vahoakan’Andriamanitra, toy izay hifaly vetivety tamin’ny fahotana.” (Heb. 11:24-26) Enga anie isika hanam-pinoana toa an’ireny olona fahiny ireny, ka hankasitraka ny fahafahana ananantsika ary hampiasa an’izany mba hanaovana ny sitrapon’i Jehovah.
13 Afaka mifidy ny namantsika isika rehetra, ary afaka mifidy fialam-boly na izay akanjo sy paozy tiantsika. Tsy mety anefa raha manaiky hobaikoin’ny fanirian-dratsy isika. Tsy mety koa raha manaraka fotsiny an’izay lamaody sy fanao be mpitia eto amin’ity tontolo ity isika, nefa tsy mendrika ilay izy. Mety ho lasa “fanaronana ny ratsy” mantsy ilay fahafahana ananantsika raha izany. (Vakio ny 1 Petera 2:16.) Hiezaka àry isika mba tsy hampiasa azy io hanatanterahana ny “fanirian’ny nofo.” Ny hanome voninahitra an’i Jehovah kosa no tokony ho tanjontsika amin’izay safidy rehetra ataontsika.​—Gal. 5:13; 1 Kor. 10:31.
14 Hahay hanao safidy tsara koa isika, raha matoky an’i Jehovah ka manaiky ny tari-dalany sy manaraka ny fitsipiny. Izy irery ihany mantsy no ‘mampianatra antsika mba hahitantsika soa’ sy ‘mampandeha antsika amin’ny lalana tokony halehantsika.’ (Isaia 48:17) Mila manetry tena isika, ka manaiky fa “tsy an’ny olombelona ny lalan-kalehany”, ary ‘tsy natao hitondra samirery ny fiainany ny olona.’ (Jer. 10:23) Tokony ‘hatoky an’i Jehovah amin’ny fo manontolo’ àry isika, fa tsy hiantehitra amin’ny fahaizantsika hoatran’ny nataon’i Adama sy ireo Israelita nikomy.​—Ohab. 3:5.
17 Nampahatsiahy azy rehetra i Paoly fa tsy hahatonga azy ireo hifandray kokoa amin’Andriamanitra ny sakafo. (1 Kor. 8:8) Nilaza koa izy hoe na manan-jo hanao izay tiany aza izy ireo, dia mila mitandrina sao izany “ho lasa vato mahatafintohina ho an’ny malemy.” (1 Kor. 8:9) Ary ahoana ny amin’ireo tsy nety nihinana an’ilay hena satria tsy neken’ny eritreriny izany? Nilaza i Paoly fa tsy tokony hitsaratsara an’izay nifidy ny hihinana izy ireo. (1 Kor. 10:25, 29, 30) Fanapahan-kevitra lehibe nifandray tamin’ny fanompoana an’i Jehovah izany, nefa ny Kristianina tsirairay no samy tsy maintsy nanapa-kevitra ny amin’izay hataony. Raha mila manaja ny safidin’ny mpiara-manompo amintsika àry isika amin’ny zavatra lehibe hoatr’izany, tsy mainka ve fa amin’ny zavatra madinika kokoa?​—1 Kor. 10:32, 33.